अण्डाको पहेँलो भागको सेवन गर्नु हुँदैन किन भनिन्छ ? के हो सत्य ? – List Khabar
Home / समाचार / अण्डाको पहेँलो भागको सेवन गर्नु हुँदैन किन भनिन्छ ? के हो सत्य ?
अण्डाको पहेँलो भागको सेवन गर्नु हुँदैन किन भनिन्छ ? के हो सत्य ?
admin February 7, 2022 समाचार Leaveacomment 79 Views
अण्डाको सेवनले स्वास्थ्यमा धेरै फाइदाहरू हुने गर्छ । तर, अण्डाको पहेँलो भागको सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै कुराहरू पनि सुन्नमा आउने गर्छन् ।अण्डाको पहेँको भागको अधिक सेवन स्वास्थ्यको हानिकारक हुनुका साथै यसले स्वास्थ्यलाई अन्य धेरै तरिकामा असर गर्न सक्छ ।अण्डाको पहेँलो भागलाई अंग्रेजी भाषामा एग योल्क भनिन्छ ।पछि यसले भ्रुणको आकार लिन्छ, जसको कारण कुखुरा तयार हुन्छ । भ्रुणमा धेरै तातो हुने हुँदा पहेलो भागलाई धेरै खाए पछि केही दिनहरूमा नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्छ ।
अण्डाको पहेँलो भागको अत्यधिक सेवनले गर्ने विभिन्न असरहरू यस्ता छन् :इन्फेक्सन : अण्डाको पहेंलो भाग खाँदा संक्रमण हुने खतरा धेरै बढ्छ । कच्चा रूपमा अण्डाको सेवनले संरमणको खतरा थप बढाउँछ ।कमजोर इम्युन सिस्टम भएकाहरूलाई खतरा : अण्डाको पहेँलो भागको सेवन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि खतरनाक हुन सक्छ । प्रतिरोध क्षमता धेरै कमजोर भएका मानिसहरूलाई अण्डाको सेवन हानिकारक हुन सक्छ । सीडीसीका अनुसार एचआईभी पीडित र अंग प्रत्यारोपण भएका व्यक्तिले अण्डाको पहेँलो भाग खानु हुँदैन ।
मधुमेहका बिरामी सावधान हुन जरुरी : मधुमेह समस्या भएका व्यक्तिहरूले अण्डाको पहेंलो भाग खानदेखि टाढा बस्नुपर्छ । अण्डाको पहेलो भागमा कोलेस्ट्रोलको एक उच्च मात्रा पाइन्छ । कोलेस्ट्रोल मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई धेरै हानिकारक हुन्छ । मधुमेह बिरामीहरूले नियमित रूपमा अण्डाको पहेंलो भागको सेवन गरेमा पखाला, ज्वरो, पेट दुख्ने जस्ता समस्या पनि देख्न सक्छन् ।मुटु रोगको जोखिम बढ्छ : अण्डाको पहेँलो भागको अधिक सेवनले मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम पनि निकै गुणा बढ्छ । अण्डाको पहेँलो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अधिक हुने हुँदा नियमित रूपमा अण्डाको पहेलो भागको सेवन गरेमा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ जसले सजिलै हृदय रोगहरू निम्त्याउन सक्छ ।
यसैगरी खैरो र सेतो अण्डामा के फरक छ ? यसका फाइदा के के छन् जान्नुहोस्: अण्डामा प्रोटिन, क्याल्सियम, ओमेगा ३, फैटी एसिड भिटामिन ए र बी भरपूर मात्रामा पाइन्छ । यसलाई सुपरफुड पनि भनिन्छ । दैनिक अण्डा खानाले गम्भीर रोग लाग्नबाट जोगाउँछ । अण्डा खानाले हड्डी मजबुत बनाउँछ । तर, धेरै मानिसलाई खैरो र सेतोमध्ये कुन चाहिँ अण्डा स्वस्थकर हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहन्छ ।खैरो र सेतो दुवै अण्डामा धेरैपटक अनुसन्धान भइसकेको छ । जसमा दुवै अण्डामा त्यस्तो तात्विक अन्तर र फरक केही पाइएन ।
दुवैको फाइदा, गुणस्तर र आकार एउटै हुन्छ । यतिसम्म कि दुवैको पोषण तत्व पनि एकै नासको हुन्छ । खैरोमा सेतो अण्डाभन्दा थोरै बढी ओमेगा ३ फैटी एसिड पाइन्छ ।खैरो र सेतो अण्डा फरक : डाइटिसियनका अनुसार अण्डा दुई किसिमको हुन्छ । एउटा, लोकल अर्को पोल्ट्री । लोकल अण्डा खैरो हुन्छ । पोल्ट्री फर्मको अण्डा सेतो हुन्छ । खैरो अण्डा सेतोभन्दा बढी स्वस्थकर हुन्छ । त्यसैले धेरै मानिस लोकल अण्डा खान मन पराउँछन् । खैरो अण्डामा प्रोटिन, कोलेस्ट्रोल र क्यालोरी धेरै पाइन्छ ।
एक अध्ययनका अनुसार सबै अण्डाको साइज र रंग तथा पौष्टिक रूपमा पनि एकै किसिमका हुन्छन् । सबै अण्डामा एकै किसिमका भिटामिन, मिनरल, प्रोटिन र क्यालोरी पाइन्छ । अण्डाको रंगले उसको पौष्टिक तत्वमा कुनै असर गर्दैन ।अण्डा छान्ने तरिका : अण्डाको रंगले उसको पौष्टिक तत्वमा फरक नपरे पनि कुखुराको खानाले अण्डाको पौैष्टिकतामा भने असर गर्छ । घाम लाग्ने ठाउँमा रहेका कुखुरा र सबै प्रकारका खानेकुरा खाने कुखुराको अण्डामा सबै पोषक तत्व पाइन्छ ।
जबकि अँध्यारो ठाउँमा राखिएको र सही आहार र दाना नपाउने कुखुराको अण्डामा पोषक तत्व कम पाइन्छ ।दैनिक अण्डा खाँदाको फाइदाँ : दैनिक उसिनेका दुईवटा अण्डा खानाले शरीरका धेरै रोगबाट बचाउन सकिन्छ । दिनहुँ अण्डा खानाले इम्युन सिस्टम ठीक रहन्छ । जसकारण भाइरल इन्फेक्सनका साथै रुघाखोकी जस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।अण्डालाई ब्रेकफास्टका रूपमा खानाले शरीरलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ । जिम जाने व्यक्तीले काँचो अण्डा दूधमा हालेर पिउने गर्दा फाइदाँ हुन्छ ।
अन्डाको पहेँलो भन्दा सेतो भाग खाँदा धेरै फाइदा छ । अन्डाको सेतोभन्दा पहेँलो भाग खानु लाभदायी हुन्छ भन्ने विश्वास गलत हो । बरु, पहेँलो छुट्याएर सेतो भाग मात्रै खानुस्, यस्ता फाइदाहरु धेरै हुन्छन् ।अण्डामा हुने सेतो र पहेलो भागको फाइदाँ : अन्डाको सेतो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुँदैन । एउटा अन्डामा हुने १८० मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल पहेँलो भागमा मात्रै हुन्छ ।
तपाई मधुमेह रोगी हुनुहुन्छ भने सेतो भाग मात्रै खाने गर्नुस् । आवश्यक प्रोटिन अन्डाको सेतो भागमा प्रोटिनको मात्रा पर्याप्त हुन्छ । एउटा अन्डाको सेतो भागमा चार मिलिग्राम प्रोटिन हुन्छ । सेतो भागमा अमिलो एसिडको मात्रासमेत प्राप्त हुने भएकाले शरीरको मांसपेशीलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ ।
Previous सुहागरात कै भोलिपल्ट दुलहीले डिभोर्स गरिन, कारण थाहा पाउँदा जो कोही चकित
Next सुन्दरताका खानी यी ५ अभिनेत्री अझै छन् बुढीकन्या, भेटेका छैनन् मिस्टर परफेक्ट